Izindaba - Izinzuzo zohlelo lokusebenza lwe-aluminium foil gasket
Izinzuzo Zokusebenza ze-Aluminium Foil Gasket
I-aluminium foil gasket yenziwe nge-aluminium ngemuva kokucindezela bese yenziwa ngokuya ngezinhloso ezahlukahlukene. Imvamisa isetshenziswa kwezinye izimboni zokupakisha ukwehlukanisa umoya nokunweba impilo yeshalofu yemikhiqizo. Ngakho-ke yiziphi izinzuzo zama-aluminium foil gaskets? ?
Okokuqala, i-aluminium foil gasket ayinabuthi futhi ayinambitheki kulesi sifundazwe. Ngaphezu kwalokho, inamandla amahle okulwa namagciwane. Ngokuvamile, amagciwane amancane awakwazi ukukhula kuwo, ngakho-ke ingaphezulu lalo lihlanzekile nezinye izinzuzo, ngakho-ke livame ukusetshenziswa ekudleni. Emaphaketheni; ngakolunye uhlangothi, i-aluminium foil gasket nayo i-opaque, ngakho-ke inomphumela omuhle wokuvikela emikhiqizweni ezwela elangeni; hhayi lokho kuphela, kubalulekile futhi nokuvulwa kwayo okulula lapho kusetshenziswa ekupakisheni umkhiqizo. Futhi amandla ayo amancane futhi angaba lula kakhulu kubathengi ukuvula; ngakho-ke kuyinto esezingeni eliphakeme yokupakisha ehlanganisa ubuhle, ukuba lula, nokusetshenziswa kalula.
I-aluminium foil gasket ayinabo ubuthi uma ishiswa, ngoba i-aluminium foil gasket yinto eshisayo eshaywayo egoqelwa ngqo eshidini elincane elinensimbi yensimbi. Umphumela wayo oshisayo wokushaya isitampu uyefana nowe-foil yesiliva emsulwa, ngakho-ke ibizwa nangokuthi i-foil yesiliva eyimbumbulu. Ngenxa yokuthi i-aluminium inokuthamba okuthambile, i-ductility enhle, nokukhanya oku-white-white, uma ishidi eligingqiwe lifakwe ephepheni le-offset eline-sodium silicate nezinye izinto zokwenza ucwecwe lwe-aluminium, nayo ingaphrintwa. Kodwa-ke, ucwecwe lwe-aluminium uqobo kulula ukuluhlanganisa futhi umbala uba mnyama, futhi umbala uzofiphala lapho uhlikihlwa noma uthintwa, ngakho-ke awulungelanga ukugxivizwa okushisayo kwamakhava ezincwadi nama-periodicals agcinwa isikhathi eside.
Vele, ayinazo izinzuzo ezivelele kuphela embonini yokupakisha, kepha futhi inenani elikhulu lesicelo kwezinye izimboni.
Isikhathi Iposi: Oct-31-2020